Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ary ny quarantine amin'ny bungalow any ambanivohitra any Maldives?
Mety misy toerana hankafizana karoketra roa herinandro. Taorian'ny ora maromaro tamin'ny fiaramanidina toa an'i Qatar Airways, nitaingina sambo haingam-pandeha nankany amin'ny nosy fialan-tsasatrao ary nitaingina ny bungalow any amin'ny fiaraha-monina lavitra miaraka amin'ny fiainana an-dranomasina milomano ambanin'ny bungalow anao.
Tonga tsy misy fanaraha-maso sarotra, na dia avy any amin'ny firenena mafana toerana COVID-19 ianao, toa an'i Etazonia, dia ataon'ny Maldives izany.
Amin'ny voalohany, ny mpitsidika iraisam-pirenena dia tsy avela afa-tsy amin'ny nosy fialan-tsasatra ary mila mamandrika ny fijanonany manontolo amin'ny orinasa iray voasoratra anarana izy ireo.
Azo antoka fa tsy fampiharana fizahan-tany faobe izany. Hatreto dia mpizahatany 117 no tonga avy any UK, 106 avy any Etazonia, 73 avy any Alemana.
Qatar Airways dia te-hiantoka ny mpandeha, afaka mandeha am-pitokisana izy. Qatar Airways dia nilaza hoe: "Amin'ny maha-iray amin'ireo kaompaniam-piaramanidina manerantany lehibe indrindra sy efa za-draharaha indrindra nandritra ny krizy COVID-19 dia azonao atao ny miantehitra aminay hitondra anao amin'ny dianao manaraka. Manohy manome antoka izahay fa ny fepetra fiarovana sy fahadiovantsika dia avo lenta indrindra, miaraka amin'ny fomba vaovao ampiharina mandritra ny dianao, manomboka amin'ny fidirana ka hatrany amin'ny toerana alehanao. ”
Mitohy izany raha misy fihanaky ny aretina eto amin'ny tontolon'ny COVID-19
Angamba izay rehetra mankany Maldives dia tokony hahalala ny torohevitry ny praiminisitry ny Bahamas, ary nilaza izy rehefa nanidy ny fireneny ho an'ny mpitsidika amerikana izy:
Tsy fantatray ny vokany maharitra amin'ity virus ity. Aza mihaino ny olona milaza aminao fa flue malefaka izy ary ampahafantaro azy fa ho salama tsara ianao. Mety misy fiatraikany maharitra ho an'ny olona amin'ny vanim-potoana rehetra izay mampihena ny kalitaon'ny fiainanao ary mety hampihena ny fiainanao.